Mapepanhau anoburitsa mashoko akazvimirira vanoturira kuvachena- Mathema - The Zimbabwean
Mapepanhau anoburitsa mashoko akazvimirira vanoturira kuvachena- Mathema
Mapepanhau anoburitsa mashoko akazvimirira vanofanirwa kubva muZimbabwe nekuti varidzi vawo vachena, Cain Mathema, gavhuna wedunhu reBulawayo akadaro.
Achitaura mune hururkuro yaakaita nepepanhau re The Zimbabwean, Mathema, uyo anotsigira zvakasimba mutungamuiri wenyika, va Robert Mugabe nesangano re (Zanu PF), akati makambani anoburitsa mashoko akazvimi-rira haadi nyika ino uye angakanganisa kuzvimirira kwenyika ino.
‘‘Amunoti makambani anoburitsa mashoko akazvimiri-ra iwaya haana nzvimbo muZimbabwe muno. Akarerekera kudivi rimwe uye anotungamirwa nevarungu nevekumavirira. Anofanira kubuda muno onoita saana BBC kana Reuters orega kutinetsa muno,” akapopota Mathema.
‘‘Vanyori venhau veThe Standard, Daily News nemamwe mapepanhau mapenzi varikutambiriswa mari isina hutsvene. Ndakanyora bhuku nezve makambani anoburitsa mashoko akazvimirira saka ndinoziva zvandiri kutaura,” akadaro mukuru uyu.
Akatsanangura mapepanhau ehurumende ekuburitsa mashoko seanotaura chokwadi achida nyika ino uye achivaka nyika. Mashoko a vaMathema anouya panguva nyika irikuedza kusunngura kuburitswa kwemashoko zvakanaka.
Muhushanyi hwavo kuZimbabwe svondo rapera mukuru wezvekodzero dzevanhu kuUN , Navi Pillay, vakasimbisisa kugadzirwa kwemitemo inosungunura kuburitswa kwemashoko kunyanya sezvo nyika yakanangana nesarudzo.
Mashoko avaMathema akakonzerwa apo bepanhau rino rakaedza kunzwa mhinduro yavo kuchipomerwa chekuti vakaenda ku Evangelical Fellowship of Zimbabwe ne Zimbabwe Council of Churches vachikumbira kuti vavaitire musangano wemunamato apo vaMugabe vaizotaura.
Munguva pfupi yapfuura mumwe musangano wemunam-ato wakaitwa muguta iroro asi zvinonzi vaMathema vakarambi-dza vaiita munamato kuti VaMugabe vataure nekuti aisada kuti vataure pamwechete navaTsvangirai.
VaTsvangirai, webato re MDC, vaivapo pamusangano uyu.
VaMathema v akati havaiziva nezvemashoko aya akati ‘Hapana chandinoziva nezvemisangano iyi’’. – TM/ZN